Budata Wink APK maka Android
Free Budata maka Android (56.00 MB)
Site na ngwa Wink, ị nwere ike ijikwa ngwa smart gị nụlọ gị site na ngwaọrụ gam akporo gị.
Na-akwado ọtụtụ narị ngwaahịa ụlọ mara mma, ị nwere ike ijikwa ọkụ, mkpọchi, sensọ, thermostats na ọtụtụ ndị ọzọ site na ekwentị gị noge ọ bụla na ngwa Wink. Nime ngwa Wink, nke na-eme ka ị mata ịdọ aka ná ntị sitere na ngwaọrụ, ị nwekwara ike ịgbanye mkpu na ọkụ na-akpaghị aka mgbe achọpụtara ọkụ na anwụrụ ọkụ.
Ngwa Wink, nke na-achọpụta ọnọdụ mmegharị nọnụ ụzọ, windo na ebe ndị ọzọ na-eziga ọkwa nchekwa, na-eme ka ọ dịrị gị mfe idobe nchekwa noge a na-atụghị anya ya. Ngwa Wink, ebe ị nwere ike ime ka ọ dị ka ịnọ nụlọ site na ịgbanwuo ma gbanyụọ sistemu ọkụ dị nụlọ gị, na-emekọrịta ọkụ noge ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ ma na-enyere ha aka ịgbanwuo na gbanyụọ ozugbo. Ọ bụrụ nịchọrọ ijikwa ngwaahịa smart dị na ụlọ gị site na ebe ọ bụla, ịnwere ike ibudata ngwa Wink nefu.
Nha faịlụ: 56.00 MB
Mmepụta: Wink App